guta : Suweon
Musakanganwa kuti discuss Ajou University
Nhoroondo Ajou University yave yakazara nezvinetso zvitsva: Haruna chete akazarura kumiganhu itsva dzidzo Korea yepamusoro nokusuma miviri-dhigirii hurongwa nezvavatorwa mumayunivhesiti kokutanga pakati mumayunivhesiti Korean, asi yakura somumwe vaikudzwa mumayunivhesiti mumakore chete anenge makumi mana kubva kwayo pakagadzwa.
ikozvino, Ajou ari vagadzirira kutora asi rimwe dambudziko. Zvinonzi achirota vayo "Pokugadzwa Second" kuti vateye nheyo dzaro gore rimwe remazana ave achitungamirira yunivhesiti uye kuva paucheche yevatungamiriri kwenzanga yedu yechokwadi.
Kuburikidza quantitative kukura uye Qualitative achikwakuka, tinosungirwa nguva yokuchera "Ajou Premium" uye kuchinja nyika muzita Ajou sezvinotevera:
Chekutanga, Update University Achachinja Zvinhu Matarenda Excellent, iye kushamisira vaviri vadzidzi pachavo uye yose vanhu.
Ajou University ichatibatsira vadzidzi pamwe "Kukwanisa vapone" mune zvemakwikwi munzanga dzedu nezivo huru uye dzidzo yakasimba majors dzavo, ari "Mano kutanga" kuitira kuti vanogona kuwana zvavanoda uye kugadzirisa matambudziko avo, uye "Mano wevapenyu rinopindirana" nako vari hanya nevamwe uye kuremekedza kusiyana.
Chepiri, Ajou University kuchasimbisa kutsvakurudza hutungamiri hwedu uye kutungamirira nzira zvose academia uye indasitiri.
Update University kudzingana "Evolutional tsvakurudzo" Via okugadzira zvinhu uye convergence kunobva pamwoyo competencies uye "Kugonesesa tsvakurudzo" kuburikidza kurira makwikwi uye nzira itsva chinokurudzira hurongwa, uye tichaita chamutsa "Kubatsira pakutsvakurudza"zvawanikwa vachishandisa kubatirapamwe pakati mumaindasitiri, academia, tsvakurudzo nemasangano, uye masangano paruzhinji.
Chetatu, Ajou University achazadzisa kwedu basa uye mabasa kuti kuchinja nzanga uye kuvhura itsva munguva.
Tichanyanya nezvaanogona edu "Kuvaka guta evanhu" mukurarama rinopindirana, "Tivandudze pasocial mufambo" runovabvumira vanhu kuenda kumusoro yakavakirwa nekungwara kwavo, uye "Vachigadzirira kubatana pakati Koreas" kuwedzera pakukoka tisvike yose.
Kuti pachiono ichi, the people of Ajou University will begin three “Pleasant Innovations.”
Innovation ndiko kutaura pakutsunga kwedu simba kukunda uye kushandura ano chokwadi, kusika yemberi zvatakatarisira. Zvinonzi kana kudzokorora zvataita kare kana kutevera nzira vamwe amakakunda chete nokukurumidza. Zvinonzi okutanga nzira itsva tega nechido.
Zviri utsanzi kwezvakatipoteredza kuti creatively kukurira matambudziko akatarisana isu; utsanzi timene, kutiza uye kuchinja edu zvapfuura nzira kufunga uye kushanda, uye nezvimwe enyika nokuti isu; uye mumagariro utsanzi pakuumba nzanga yedu inzwi netsika pakati mukurwisana nekupatsanurana.
ava Pleasant uye Kunonakidza zvakagadzirwa nekuti tiri kufara kuti azviite, pane kuudzwa kuti nevamwe.
Izvi zvakagadzirwa unofadza nokuda Ajou vanhu kuchaita kuti inofadza zvakagadzirwa munyika yose nzanga Republic of Korea.
Kana ndiwedzere Shanghai, vatigere zvichachinja uyewo. With chivimbo ichi, hapana chipingidzo muupenyu hwedu ushingi akakuitira matambudziko akatarisana isu, uye nechido kuziva hope edu kusingaperi.
Please kutsigira ushingi uye vanobatana ehondo nokuda Pleasant zvakagadzirwa kubudikidza Ajou vanhu.
update University, dzakasimbiswa 1973 pasi Mashoko pamusoro “yakanakisisa yunivhesiti Asia nokuda remakore rechi21”, ari kutungamirira tsvakurudzo yunivhesiti pamwe 10 colleges Korea. Riri Suwon, vanenge 30km kumaodzanyemba Seoul, ndiwedzere ane 14,000 vadzidzi (9,000 Rokutenderwa, 3,500 girajuweta, uye 1,500 mune mamwe mapoka).
The simba Ajou pane zvedzidzo zvirongwa uye tsvakurudzo nhema Engineering, iT, Bt, NT, Medical Science, Business uye International Studies. Ajou zvinowanzodavirwa kuzivikanwa nokuda kwayo dzakawanda zvirongwa dzaungagona uye dzaitsigira chaizvo vadzidzi dzakawanda uye ane pakubatsirana nokufambidzana vanopfuura 200 mumayunivhesiti mune 58 nyika. Pane siyana zvirongwa dzakawanda panguva Ajou kusanganisira mudzidzi uye fakaroti exchanges, chikoro dzakawanda chirimo, Korean chirongwa mutauro, nezvimwewo. vadzidzi International vari mapoka inopiwa Chirungu kubudikidza majors siyana. Ndiwedzere Nhasi pamusoro kugamuchira 750 Vadzidzi dzakawanda pagore.
Weboka International Studies
mu 1971, when modernization and industrialization were under way in Korea, Korea and France entered into an agreement for the establishment of Korea-France Technology Junior College in order to exchange technology and culture through education. According to the agreement, Ajou Engineering Junior College, the forerunner of Ajou University, was founded in March 1973 by Yusin Institute established by Park, Chagn-won, the chairman of Yusin Express Tourism Co., Ltd. Starting as Ajou Engineering Junior College, Ajou College recruited 280 students during its first year from four departments, including Electronics, Precision Mechanical Engineering, Fermentation Chemical Engineering, and Industrial Management. The school was promoted to Ajou Engineering College a year later and produced its first graduates in 1997. mu 1997, Kim, Woo-jung, the chairman of Daewoo International, contributed his personal wealth to establish Daewoo Institute and took over Ajou University.
Unoda discuss Ajou University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo